कार्यकर्ताले पार्टीको रोबट बन्नु हुदैनः नेवि संघ केन्द्रिय सदस्य शाही (भिडियो सम्वाद) | KTM Khabar
२०७३ मंसिर २८ गते १०:२३ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेस निकट भात्रिसंगठन नेवि संघसंग आबद्ध रहेर विद्यार्थी राजनितीमा होमिएका दैलेखी युवा तथा नेवि संघका केन्द्रिय सदस्य प्रेम बहादुर शाहीसंग केटिएम खबर डट कमका लागि रबि भट्टराईले भिडियो विशेष सम्वाद गरेका छन् । प्रस्तु छ सोही भिडियो कुराकानीको सम्पादित अंशः
व्यस्तता यस्तै समसामयिक बिद्यार्थी राजनितीलाई नै नियाली रहेको अबस्था छ । लामो समय देखि स्वतन्त्र बिद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नभएको अवस्था र त्यो निर्वाचन गराउन तर्फ अनी वर्तमान राजनितीलाई नजिकबाट अध्यन गर्न व्यस्त छौ भन्नु पर्छ ।
तपाई कलिलै उमेरमा बिद्यार्थीको नेतृत्व तहमा पुग्नु भएछ, तपाईको भुमिका कस्तो छ ?
हामीले भन्ने गरेका छौ राजनिती फोहोरी खेल हो भनेर, एक खालको आईडियोलोजी नै बन्न गएको छ । धेरै बिद्यार्थी साथीहरु राजनितीबाट टाढा बस्न चाहान्छन् तर कुनै पनि कुवा फोहोर भयो भन्दैमा गाउलेले पानी नै नखाने भन्ने त हुदैन नि ?, त्यसलाई सफा गरेर गाउलेले पानी त खानु पर्यो, हो त्यसैले हामी राजनितीबाट भाग्नु भन्दा राजनिती भित्रै पसेर यो राजनितीलाई सफा गर्न चाहन्छौ र यो संभव छ ।
तपाई कती बर्ष हुनु भयो ?
म २६ बर्ष भएँ ।
कति बर्ष देखि राजनितीमा लाग्नु भयो ?
म १६ बर्ष देखि राजनितीमा लागे ,सक्रिय रुपमा नै १६ बर्ष देखे राजनितीमा लागेको हुँ र अहिले रजनिती सुरु गरेको एक दशक भयो अझै यसलाई वुझ्दै छु । अझै सिक्न धेरै बाकि छ । म सानै उमेर देखि कांग्रेस निकट थिए भनौन मेरो बुवा पनि कांग्रेस निकट राजनिती गर्नु हुन्छ ।
तपाईको बुवा पनि राजनितीमा हुनुन्छ ?
हो, मेरो बुवाको नेपाली कांग्रेस दैलेखको पुर्व पार्टी सभापती र महासमिती सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ । अगाडी भएका दुई ओटा चुनावमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेद्वार भएर पराजित हुनु भयो ।
बुवा पनि कांग्रेसको राजनितीमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर तपाई पनि कांग्रेस निकट राजनिती गर्नु भएको हो ?
हैन हैन, बुवा एउटा पार्टीमा भएर छोरा त्यसैमा लाग्नु पर्छ भन्ने कुरा गलत हो तर अर्को के सत्य हो भने डाक्टरको छोरा डक्टर नै नभए पनि ज्वरो आएको औषधी उसले चिन्न सक्छ । त्यसैले बुवा राजनितीक फिल्डमा भएको कारण मलाई राजनिती बुझ््न सहज भएको चाहिँ हो तर मैले कांग्रेसको ईतिहास नियालेर नै कांग्रेस निकट बिद्यार्थी आन्दोलनमा होमिए । हरेक आन्दोलन र हरेक अप्ठ्याराहरुमा नेपाली कांग्रेसले खेलेको नेतृत्वदायी भुमिकाको प्रभाव हुनपर्छ । म नेपाली कांग्रेस निकट राजनितीमा होमिए ।
कांग्रेस जो राज सहितको प्रजातन्त्र मान्थ्यो र अहिले गणतन्त्रमा छ, तपाई केही फरक पाउनु हुन्छ ?
बिचार सिद्धान्त भनेका समयका माग अनुसारको हुनु पर्छ जस्तो लाग्छ, अवश्य पनि हिजोको परिबेशले राजा सहितको प्रजातन्त्र मागेको थियो तर आज त्यस्तो वातावरण रहेन । ६२, ६३ को आन्दोलन पश्चात ब्यापक चेतना स्तरमा परिवर्तन भयो र त्यो एकतन्त्रिय राजा पनि लोकतन्त्रको बाधक बन्यो । यदी बाधक नभई साधक बन्दिएको भए हुन्थ्यो तर बाधक बनेको परिणाम अहिले देश गणतन्त्रमा छ ।
अहिले आफ्नो पार्टीको रोबट बन्ने प्रवृति सिर्जना भएको हो ?
तपाईलाई भन्न चाहे कसैले पनि आफ्नो पार्टीको रोबट बन्नु भएन । हामी चेतनशिल भएको नाताले आफ्नो पार्टीको गलत निर्णयलाई गलत भन्न सक्नु पर्यो र म ठोकुवा गरेर भन्न चाहान्छु अन्य पार्टी संगठन भन्दा हाम्रो संगठन त्यो आवाज उठाउने हैसियत राख्छ , त्यसका प्रसस्तै उदाहरणहरु छन् ।
तपाईहरुलाई आरोप छ, लोकतन्त्रको अभ्यास भन्दा टिका लगाउने प्रवृतिको विकास भएको हो ?
यसरी बुज्न भएन, कही कतै त्यस्ता आवाज उठेका होलान् तर सर्वसम्मत अथवा सबैको सहमतीमा पदाधिकारी चुनिन्छन भने पनि त्यसलाई नराम्रो भन्न भएन तर कहि कतै त्यस्ता आवाज उठेका हुन् त्यस बिरुद्ध हामी आवाज उठाई रहेका छौ ।
देशको राजनिती जटिलता तिर गईरहेको छ के देख्नु हुन्छ ?
यो संसोधन नेपाली जनताका लागि हैन र मधेसी दलहरुका लागि चित्त बुझ्दो छैन भने त केका लागि संसोधन ? फाटो ल्याउनका लागि मात्र संसोधन प्रस्ताव आएको हो भने यसको तुक छैन तर समग्र नेपाली जनताको भावना समेटिने र हितको लागि हो भने यो संसोधन हुनुपर्छ ।
आम युवा विद्यार्थीहरुमा राजनितीक बितृष्णा छ, यसलाई कसरी चिर्नु हुन्छ ?
म पुराना नेताहरुलाई सम्मान गर्दछु उहाहरु परिवर्तन तथा राजनैतिक स्वतन्त्रताका लागि लड्नु भयो तर अब युवाहरु आएका छन उहाँहरुले जती लड्नु भयो, ती उपलब्धिलाई सम्मान गर्दै आगामी आर्थिक समुन्नतीको नेतृत्व युवा साथीहरुले गर्नु पर्दछ ।
धन्यवाद, केटीएम खवर डटकम समपुर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।